Xirxiridda iyo Kala -diridda - Shaqaynta Xikmad leh
Xirxirida Iyo Soo -saareyaasha Dharka
1.Xirmooyinka Fudud ee Poly
Waxaan samaynaa xirxirida boorsooyinka fudud oo lacag la'aan lagu daray; waxaad codsan kartaa in la soo buuxiyo gabal kasta ama lagu soo buuxiyo daraasiin ama wax kasta oo aad jeceshahay. Waxaan jecelnahay inaan ku siino wax si toos ah ugu soo bandhigi kara macmiilka astaanta dharkaaga.
Si aad u hesho feejignaan dheeri ah iyo sumadayn, waxaad sidoo kale ku samayn kartaa astaanta caadada ama naqshad kasta oo ku jirta bacda poly. Waxaan leenahay ikhtiyaarkan si aad u hesho waxaad sida saxda ah u rabtay, oo aan hubino inaan daboolayno dhinac kasta oo ka mid ah baahida summadaada. Qaar ka mid ah codsiyadaas gaarka ah waxaa ka mid noqon kara; xirxirida bacaha shaqsiyeed, shaashadda gudaha ku daabacan, tags caadadii la xirxiray, xirxirida jumlada, sumadaha laalaado ee daabacan, iwm.
Maraakiibta iyo Bixinta
Marka loo eego shuruudaha macmiilka, waxay dooran karaan qaabab kala duwan oo gaadiid.
Sida soo saaraha dharka caadada u ah, si loo hubiyo tayada dharka iyo habsami u socodka gaadiidka, waxaan siinnaa macaamiisha dharka kala duwan siyaabo maraakiib caadiya.
Dharka WWK wuxuu la shaqeeyaa shirkado badan oo xamuul oo bad -mareen ah iyo kuwo caalami ah, sidaa darteed qiimaha dhoofintu waa mid aad u caqli badan. Waxaan u dooran doonaa habka gaadiidka iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha waxaanan u dooran doonaa shirkadaha gaadiidka ugu kharash-badan.
-By Badda Jaban & gaabis
Adduunka oo dhan 20-25 maalmood
-Dhaqanka Hawada Sare & qaali
Yurub 3-5 maalin shaqo
Waqooyiga Ameerika 3-5 maalin shaqo
Koonfurta Ameerika 3-5 maalin shaqo
Afrika 3-5 maalin shaqo
Aasiya 3-5 maalin shaqo
Hadda La xiriir si aad u Caadaysato Astaantaada!